P3D Dhibaatooyinka V3
P3D Dhibaatooyinka V3 sano 2 5 bilood ka hor #906
Ma hubo in qof kale uu horey u soo saaray dhibaatadan, laakiin ...
Waxaan haystaa a p3d v3, iyo markii aan ku rakibo FSUIPC, way burburtaa. Xitaa ma bilaabmayso. La'aanteed, wax waliba way shaqeeyaan.
Miyuu jiraa waddo ku xeeran?
P3D Dhibaatooyinka V3 sano 2 5 bilood ka hor #907
hel v4. waa waxoogaa xasilloon waxa aan maqlo. Waan ku dhejinayaa FSX sida shimbiraha lacagla'aanta ah aan ula shaqeeyn P3D
P3D Dhibaatooyinka V3 sano 2 5 bilood ka hor #908
Waxaa la xaliyay, SimConnect ayaa dhibaatadu ahayd. Laakiin, hadda waxaan haystaa dhibaato kale .. AAD u badan oo diyaarado loo sheegay inay ka shaqeeyaan labadaba ... dhab ahaan iyagu kama shaqeeyaan P3D... Waan jeclahay, laakiin ... damin. Qaddarka aan la rumeysan karin ee dhibaatooyinka iyo qaladaadka.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.220